Thiha Aye Kyaw | 12 Sep 2019 | 1 min read
ဒီ ပို့စ်ကို ဖေ့ဘုတ်မှာ ၂၀၁၉ မေလ ၁၀ ရက်နေ့က တင်ခဲ့ပါတယ်။
အခုပြောမယ့် ဟာတွေ ဖတ်ဖို့ သင့်ဆီမှာ ဇော်ဂျီနဲ့ ယူနီကုဒ် ကွာခြားပုံကို အနည်းအကျဉ်း သိထားမယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ်။အခုတလော ဂယက်ရိုက်နေတာက Android နဲ့ နောက်ဆုံး ဗားရှင်းဖြစ်တဲ့ Android Q မှာ ဇော်ဂျီ အထောက်အပံ့ပေးပြီ ဆိုတဲ့ ကိစ္စပါပဲ။
Android 5.0 (Lollipop) ကနေစပြီးတော့ မြန်မာ ယူနီကုဒ်ဖောင့် တစ်ခုကို Google က သူတို့ကိုယ်တိုင် ရေးပြီး ထည့်သွင်းခဲ့ပါတယ်။ အဲဒါကတော့ Noto Sans Myanmar ဖောင့်ပါ။ အခု Android 10 (Q) မှာတော့ ဘယ်သူ ချွန်လိုက်တယ် မသိ၊ Noto Sans Manmar ZawDecode ဖောင့်ဆိုပြီးတော့ ပြောင်းပြီး ပါလာပါတယ်။
ရေးတဲ့ နေရာမှာ တိုင်ပတ်ကြပါလိမ့်မယ်။ ဇော်ဒီကုဒ်ဖောင့်တွေက ယူနီကုဒ်ဖောင့်တွေဖြစ်တဲ့ အတွက် ယူနီကုဒ်နဲ့ ရိုက်မှ အမှန်အတိုင်း ပြပါလိမ့်မယ်။ဒါပေမယ့် နောက်ထပ် ချွန်တဲ့ လူတွေ ရှိသေးတော့ Google ရဲ့ တရားဝင် ကီးဘုတ် ဖြစ်တဲ့ GBoard မှာ ဇော်ဂျီ ရိုက်လို့ ရသွားပါတယ်။ (စာရိုက်ရင် ဇော်ဂျီ စာလုံးတွေ ထုတ်ပေးတာကို ပြောတာပါ။) Frozen တို့ Bagan တို့မှာလည်း ယူနီကုဒ် ရိုက်လို့ရပါတယ်၊ ရွေးချယ်စရာ Option နဲ့ လက်ကွက်တွေ ပေးထားပါတယ်။ GBoard မှာတော့ ရွေးလို့ မရဘဲ၊ စာရိုက်တာနဲ့ ဇော်ဂျီ စာလုံးတွေ ထုတ်ပေးပါတယ်။
GBoard နဲ့ပဲ ရိုက်ချင်သပ ဆိုရင် Font Converter တွေ (Rabbit, MM Font Converter, etc.) ထဲမှာ ဇော်ဂျီ နေရာမှာ ဝင်ပြီး ရေးမယ်ဆိုရင် အမှန်မြင်ရပါလိမ့်မယ်။
Tags: android-q myanmar font zawdecode myanmar unicode
A nerd. Writing this blog because he's procrastinating from doing his work.
စာရွက်နဲ့ ဘောပန်သည်သာ အကောင်းဆုံး
အလုပ်ပြီးအောင် လုပ်တဲ့ နေရာမှာတေ…
ဤ ဘလော့(ဂ်)အား ခရစ်သက္ကရစ် ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ စက်တင်…